pisitoni mhete - China Wenzhou Dongyi Machinery
Gasket mhete & mafuta itsvedzerere mhete
Unobva gungano tsvimbo
capablities & bvumidzwa
Gasket mhete & mafuta itsvedzerere mhete (wiper mhete)
Tribologically zvinobetsera zvinhu Gas-zvakasimba kuvakwa kuti yakaderera-samolecular-uremu magasi pisitoni zvindori namira gasi iri compression mukamuri reciprocating compressors. Ivo customized, maererano zvakagadzirwa uye zvinhu, kuti nhengo kushanda mumamiriro ezvinhu painocheneserwa, ari negasi indasitiri, uyewo petrochemical uye zvemakemikari Mazinga. The chaizvo kugadzirwa zvindori uyewo kubvumira yakavimbika kushanda ane refu upenyu basa maindasitiri mhepo kugadzirwa uye dzakawanda ...
Tribologically zvinobetsera zvinhu
Gas-zvakasimba kuvakwa kuti yakaderera-samolecular-uremu magasi
pisitoni zvindori namira gasi iri compression mukamuri reciprocating compressors. Ivo customized, maererano zvakagadzirwa uye zvinhu, kuti nhengo kushanda mumamiriro ezvinhu painocheneserwa, ari negasi indasitiri, uyewo petrochemical uye zvemakemikari Mazinga. The chaizvo kugadzirwa zvindori uyewo kubvumira yakavimbika kushanda ane refu upenyu basa maindasitiri mhepo kugadzirwa uye dzine vakawanda kwacho okugadzira.
Pisitoni zvindori, mutasvi zvindori nezvisungo anogadzirwa mune siyana mazano:
Mumwe-chidimbu kana segmental yakarurama
mazano zvenzeve uye kwakasimbiswa yakananga anofambidzana kuti kunyanya matambudziko uye kunoda kushanda mafomu. Izvi zvakare zvaisanganisira kubudirira kutendeuka vakawanda kubva lubricated vasiri lubricated operation.Pressure mwero zvindori dziripo, kana akaonekwa akakodzera mukuru kumanikidzwa zvikumbiro uye pisitoni / mutasvi mhete anofambidzana iripo nokuda chaiwo mafomu.
Large dhayamita pisitoni zvindori anosvika 47 "(1200mm) vari tsika kugadzirwa kuti rinokosha zvinodiwa. A siyana esimbi pisitoni uye mutasvi zvindori tiri kugadzirwa, achishandisa akasarudza mamakisi dzendarira kana vakakanda simbi, apo operative zvinodiwa zvitungamirire.
Previous: pisitoni & shamhu
Next: inobereka deko
14mm Pin pisitoni
3921919 pisitoni Rings
6ct Engine pisitoni Assembly
China Flat Coil Big Kutakura Force Spring
Coil Springs For pasofa
Cummins Qsb6.7 pisitoni
Dcec 6ct 260 HP pisitoni
Deutz Engine pisitoni Assembly
Diesel pisitoni For Sale
Engine Parts pisitoni Engine Assembly
Flat Coil Big Kutakura Force Spring
Kwakakurudzira Steel Spring For nembama Band
Howo pisitoni Vg1560037011
Isle Engine pisitoni
Lockable Gas Spring / nokukiya Gas Lift
Mitsubishi pisitoni And Pin
Pisitoni And Pin
Pisitoni And Pin Assembly
Pisitoni Compressor Valve
Pisitoni For Wave125
pisitoni Ring 80mm
Reciprocating pisitoni Compressor Valve
Akakungurutsira kwakakurudzira Steel Spring For nembama Band
Zononoka Power Spring
Steel Spring For nembama Band
Makakatanwa Coil Springs
Volvo Engine pisitoni Td71
Wd615 Engine pisitoni Vg1560037011
pisitoni & shamhu
No.12 Gangsheng nengoro, Konggang New Area, Longwan District, Wenzhou City
Rakaiswa nokuti akagamuchira reciprocatin ...